Download Bulbul : Episode-17
Aakar December 23, 2009
Listen to Bulbul Episode-17 [December 23,2009].
रात्री बसाइ को यो सत्रौँ अंक मा केही रात्री गन्थनको साथमा सुमधुर गजलहरु लिएर, सदा झैँ आज पनि अच्युत घिमिरे र शशिन्द्र गौतम उपस्थित हुनुभएको छ ।
आखिर ईश्वर कसले देख्यो र ? न कसैले आजसम्म ईश्वरसंग कुरा गरेको छ । तर ईश्वरको अस्तित्व छ भन्ने आस्थामा हामी श्रद्धा गर्छौं । आस्थाले नै ईश्वरको स्वरुप बनाउँछ । हामीले फोटोमा देखिरहेको हुनाले शिवको स्वरुप त्यो होला भन्ने अवधारणा बनाएका हौं । गणेशको लामो सुँड हुन्छ भनेकै भरमा गणेशका फोटा भनेर बजारमा भेटिएका हुन् । के गणेशको स्वरुप त्यस्तै होला र ? रामायण श्रृंखलामा रामानन्द सागरको निर्देशनमा रामसीताको भूमिका निर्वाह गरेका अरुण गोविल र दीपिका आज साक्षात् राम सीताका स्वरुप भएर अधिकाँश घरका पूजाकोठाहरुमा सजिएका छन् । के ती आस्थाका ईश्वर हैनन् र ? तपाईं पनि मेरो पाँच इन्द्रियको एउटा अनुमानित स्वरुपमा हुनुहुन्छ र मैंले आस्था राखें तपाईंप्रति । तपाईं मलाई सुन्नु हुँदैछ भन्ने आस्थामा न यति कुरा बोलिरहेको छु म । नत्र यो सुनसान कोठामा एक्लै किन बोलिरहन्थें ? हावासंग बोल्नुको कुनै तुक छैन । व्यक्तिसंग बोल्दैछु म र त्यो व्यक्ति तपाईं हो ।
तपाईं पनि यतिबेला त्यहाँ एक्लै यति चिसोमा बसेर देख्दै नदेखेको मान्छे, सधैं रेडियोमा मात्र बोल्नेसंग साथ दिइरहनुको औचित्य के थियो र ? ओछ्यान नजिकै भए खुरुक्कै सुत्नुहुन्थ्यो होला, भान्छामा भए चूपचाप खाना खानुहुन्थ्यो होला, टि.भी. मा राम्रो कार्यक्रम होला, त्यो हेर्नुहुन्थ्यो होला । तर तपाईंलाई पनि मसंग कुरा गर्नुछ । त्यसैले तपाईं सुत्नुहुन्न, टिभी हेर्नुहुन्न वा मलाई नसुनिने ठाउँमा जानुहुन्न । कुरा गर्ने भनेर दुई जनाको संवाद पटापट नै हुनुपर्छ र ? म तपाईंको कुरा गर्छु, तपाईं मलाई सुन्नुहुन्छ । टेलिफोनले दोहोरो संवाद गराउँछ, पत्रले एकोहोरो सन्देश ल्याउँछ र रेडियोले एकोहोरो कुरा गराउँछ ।
यसो भनेर रेडियो मात्र तपाईंको साथी हैन । म तपाईंको साथी हुँ । रेडियो मात्र तपाईंको साथी भए भरे राती ११–१२ बजेपछि तपाईंले सुनेका रेडियो स्टेशनबाट आवाजहरु आउन छोडेपछि पनि तपाईं आफ्नो रेडियो सेट च्यापेरै बस्नुहुन्थ्यो । तर तपाईं त्यसो गर्नुहुन्न । त्यसैले रेडियो माध्यम हो हाम्रो सम्बन्धको । प्रेम त तपाईं र म बीच छ, आत्मीयता हामी बीच छ । सम्बन्ध, यो बाबष्च, यो निकटता...यो त केवल तपाईं र म बीच छ । त्यसैले मेरो बुलबुलियन आउनुस्, एकपटक या हाम्रो सम्बन्धको माध्यम रेडियोलाई धन्यवाद दिऊँ । अनि यही रेडियो बनाउने मार्कोनीलाई पनि धन्यवाद जसले तपाईं र मेरो सम्बन्ध सेतुको काम गर्यो । र हाम्रो सम्बन्ध युग युग बाँचिरहोस् ।
Bulbul isaRadio Program (a gajal program). Thanks to BULBUL Team for bringing suchawonderful program.You can directly send your suggestion, comments & even your gajal to: bulbul[at]unn.com.np or to: ghimireachyut[at]gmail.com
Download: Bulbul Episode-17 [December 23,2009]
Bijay Mishra December 24, 2009 at 2:48 PM
Hi Aakar Bro!! Thanks for the gem by achyut dai....was desperately looking for more from you and achyut dai. Thanks for Bulbul!